Madaxweynaha DFKMG oo goor dhaweyd ka degay magaalada Adis Ababa ee Itoobiya – SBC
Madaxweynaha DFKMG oo goor dhaweyd ka degay magaalada Adis Ababa ee Itoobiya
Madaxweynaha Dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed & wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhaweyd ka degay magaalada Adis Ababa ee caasimada wadanka Itoobiya, halkaasi oo la sheegay in uu kaga qayb galayo shirka urur goboleedka IGAD oo ka furmaya wadanka Itoobiya.
Sheekh Shariif ayaa xubnaha la socda waxaa ka mid ah Ra’isalwasaare kuxigeenka ahna wasiirka gaashaandhiga C/kariim Maxamuud Xaaji Fiqi & taliyeyaasha qaybo ka mid ah ciidamada, waxaana ay ku biirayaan xubno ka mid ah wasiirada dawlada KMG oo horey ugu sugnaa magaalada Adis Ababa oo kala ah Ra’isalwasaare kuxigeen ahna wasiirka arimaha dibada Maxamed C/laahi Oomar, & wasiirka warfaafinta C/kariim Xasan Jaamac.
Warar SBC ay ka heshay ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Sheekh Shariif & xubnaha kale ee xukuumadiisa ka mid ah ay shirkaasi ku soo bandhigi doonaa baahida loo qabo in wadamada gobolka ay xoojiyaan taageerada dawlada KMG isla markaana la kordhiyo tirada ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo gacan siinaya ciidamada Dawlada ee dagaalka kula jira xoogaga Al-Shabaab.
Safarkan ayaa sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyadoo Ra’isalwasaaraha dawlada KMG ee dhawaan uu magacaabay Madaxweynaha laga sugayo in uu soo magacaabo golaha wasiirada ee cusub.
wan lasocnaa mudtadiin halkood balse waxba masoo kordhin karaan hadii ciidamo kale oo galaha ayadalbadaan kuwii hore halkee ayey kabaheen